Gor Goradii Dad Cunka ahaa aya soo Gaadhay Degaanka xaaji salax e Oodwayne, ilmo yarna ku dilay | Biyoguurenews.com
Home Wararka Gor Goradii Dad Cunka ahaa aya soo Gaadhay Degaanka xaaji salax e...
Gor Goradii Dad Cunka ahaa aya soo Gaadhay Degaanka xaaji salax e Oodwayne, ilmo yarna ku dilay
Deegaanka Xaaji Saalax oo ka tirsan Gobolka Daad Madheedh ayaa lagu soo waramayaa in uu wiil yar ku cunay gorgor. wiilkan yar oo ay da’diisu ahayd sano jir ayaa lagu magacaabi jiray Mawliid Aar nuur walandhaqe ayaa waxa uu gorgorkaasi
soo gaadhsiiyay dhaawac halis badan, waxaanay wararku sheegayaan in uu ilmahaas yari u dhintay weerarkaasi ku soo qaaday gorgorku. Dhawr maalmood ka hor ayay ahayd markii uu deegaanadda gaashaamo ee wadanka Ethiopia uu afar caruur ah ku cunay gorgorkaasi. mid ka mid ah afartaasi caruur ah ayaa xilligaasi u dhintay dhaawacyadii uu soo gaadhsiiyay gorgorku, hasayeeshee saddex kale ayaa iyaga la dabiibayaa dhaawacyadii
uu soo gaadhsiiyay. sidoo kale deegaan ku yaala isla Ethiopia, gaar ahaan deegaanadda soomaalida ayaa waxa uu sidaas oo kale gorgorkani weerar ugu qaaday dhalinyaro halkaasi ku sugnayd, kuwaas oo aanu xilligaasi waxba gaadhsiinin.
Previous articleMaxaad ka taqaan Labadii dagaal ee dhex maray Masar iyo Itoobiya loogana adkaaday Masaarida?
Next articleKenya o Dhawaan hargaysa Ka Furanaysa Qunsuliyad diblumaasi,